I-hydrogen peroxide engavamile, engathengwa nakanjani noma yiliphi ikhemisi ngentengo ephansi kakhulu, iyisisombululo sendawo yonke yezifo eziningi ezikhona. Uthi uProfesa Neumyvakin, owake wabhala incwadi ngale ndaba. Uthi leli cube livikela ngokugcwele ukushaya, ukuhlasela kwenhliziyo, futhi kuvimbela ukubukeka kwezicubu ezimbi.
Iminyaka eminingi yocwaningo kanye nokuhlolwa okuningi kwososayensi odumile kwakungeyona ize. Kufanelekile ukuthi uvivinye zonke izakhiwo zomzimba onjalo, ngaleyo ndlela efakazela ukuthi ngosizo lwe-peroxide, ungazinikela iminyaka eminingi yokuphila, ukukhula kwentsha futhi uvikeleke ezifweni eziningi.
Ungabona lokhu ngokwakho, ngokubheka izinkulumo zemfundo. I-Neumyvakin ingaphezu kweminyaka engu-80 ubudala, futhi yena, ngaphandle kokuhlupheka, ukhuluma nezilaleli ezinkulu. Ngaphezu kwalokho, uprofesa unikeza izingxoxo eziningi, uhlangabezana kahle nabaphathi bezempilo yakhe, futhi ubhala izincwadi (isibonelo, "Hydrogen Peroxide: Myths and Reality", i-Neumyvakin IP).
Yini engakwelashwa nge-peroxide?
Ukwelapha nge-peroxide evamile ekhemisi ngokuvamile kwenziwa ukuze kubhubhise izifungi ezihlukahlukene, amagciwane nama-bacterium. Ngosizo lensimbi elinjalo, kungenzeka ukuthi kuvuselele futhi kuvikeleke ngokuphumelelayo. Ngokusho kukaProfesa Neumyvakin, obhala umsebenzi othi "i-Hydrogen Peroxide: Amanga Neqiniso," ungayilahla ngempumelelo enkulu:
Izifo zenhliziyo nemithambo yegazi;
I-brronchitis, eqhubeka efomini elingavamile;
Ukusabela okwenziwe nge-allergic kuya kwesimiso esithile;
Izifo eziphefumulayo ezinamandla;
Izifo zomlomo womlomo;
Lesi simangaliso-agent sikwazi ukuvimbela cishe zonke izifo kanye nezifo, futhi, ngaphezu kwalokho, kusiza ukusekela yonke imisebenzi yomzimba womuntu ngendlela engcono kakhulu.
Izindlela zokwelashwa nge-peroxide
Uhlelo oludingekayo lwezokwelapha ngosizo lalesisisindo somhlaba jikelele lufana nalokhu: okokuqala, umuthi uthathwa ngokudonsa okulodwa (kulokhu kufanele kube ngu-3%). I-Neumyvakin (i- "Hydrogen Peroxide: Myths and Reality") ichaza ukuthi lesi sidakamizwa sasihlanjululwe ngaphambilini ku-50 mg wamanzi abilayo ajwayelekile, ehlile ekamelweni lokushisa.
Sebenzisa le remedy isimangaliso kathathu ngosuku nsuku zonke. Emva kwalokhu, nsuku zonke, udinga ukwengeza ukwehlisa kwezimali. Lokhu kusho ukuthi ngosuku olulandelayo, i-hydrogen peroxide kufanele ihlanjululwe ngendlela efanayo ku-50 ml amanzi, kodwa kufanele ithathe amaconsi amabili kathathu ngosuku.
Uma inani lamaconsi athathwa ngesikhathi liba yishumi, umthamo kufanele ushiywe kuleli zinga.
Usosayensi encwadini ethi "Hydrogen Peroxide: Myths and Reality" ayincomo ukukhulisa inani le-peroxide. Lesi sidakamizwa sidinga ukudakwa izinsuku eziyishumi, futhi emva kwalokho kufanele wenze ikhefu isikhathi sezinsuku ezintathu. Lapho nje umzimba uhlala, ungaqala ngokushesha ukuthatha. Lolu hlelo lulandelayo: amaconsi angu-10 omuthi ngezikhathi ezintathu ngosuku. Ungakhohlwa ukuthi awukwazi ukudla ngaphambi kokuthatha i-hydrogen peroxide, isisu sakho kufanele sibe nalutho. Ngakho i-agent izokwenza kangcono emzimbeni futhi isebenze yonke impi yokubuyisela. Ngemuva kwalokho, ungenza elinye ikhefu lihlale izinsuku ezintathu, bese uqala kabusha uhlelo oludala lokuthola.
UProfesa Neumyvakin ucaphuna encwadini yakhe ethi "Hydrogen Peroxide: Myths and Reality" izibonelo zokusetshenziswa komuthi onjalo jikelele. Ukhuthaza ukuthi uthathe isiraphu engamashumi amabili-gram bese udayela kuso isisombululo se-peroxide nesisombululo esivamile saline. Ikhambi kufanele libe ngu-3%.
Ngokuphathelene nesilinganiso, khona-ke i-20 ml ye-saline ye-pharmacy ithathwa ku-0.4 ml we-hydrogen peroxide. Isixazululo sijova kancane kancane emthanjeni (imizuzu emibili noma emithathu). Ngemva kwalokhu, ukwandisa umthamo wokwakheka ngu-0.1 cube. Isilinganiso kufanele siswe ku-1 ml peroxide nge-20 ml ye-pharmacy saline. Kubalulekile! Ungenzi le nqubo ngaphandle kokuqondiswa ngumchwepheshe!
I-peroxide ithathwa nsuku zonke, inkambo edingekayo yezinqubo kufanele ibe ngama-reception 8 kuya ku-9. Emva kwalokhu, udinga ukuthatha ikhefu elifushane, elingadlulela emavikini amabili kuya kwamathathu. Okulandelayo ezimbili noma kathathu ngesonto, kunikezwa izijovo. Umthamo owenzelwe wona nguProfesa Neumyvakin ungu-1 ml peroxide nge-20 ml we-saline yemithi.
Ukupheka okunikezwe encwadini
Incwadi ethi "Hydrogen Peroxide: Myths, Reality" nguProfesa Neumyvakin uhola izindlela ezilandelayo zokwelashwa ngosizo lwalesi thuluzi.
Uma unesifo sinusitis, qeda i-hydrogen peroxide emanzini ajwayelekile abilisiwe (amaconsi angu-15 omuthi owodwa ngezipuni ezinamakhemikhali). Ngemuva kwalokhu, ingxube elungiselelwe kufanele ilandelwe futhi ichitheke emakhaleni ngamunye. Lapho kusetshenziselwa izinyathelo, kudingekile ukuba uphumele ngokucophelela okuqukethwe kwabo kusuka kwisono esiswini.
Kusuka ku-osteochondrosis kuzokusiza ukucindezela, okuzokwenza ukuthi ubuhlungu bukhulu. Ngale njongo, ucezu lwendwangu ezivela ezintweni zemvelo (ukotini, ilineni, njll) liyancwilisa kulo muthi wamakhemikhali bese usetshenziselwa indawo ebuhlungu kakhulu. Ngemuva kwalokho, yimboze ngefilimu yokudla ebonakalayo. I-compress enjalo kufanele ibe kwisayithi eligulayo ingxenye yesigamu sehora, ikwaziswa yi-Neumyvakin (i- "Hydrogen Peroxide: Myths and Realality").
Ubufakazi balabo abaye bazama iresiphi elinjalo encwadini ngokwabo bathi bayaphumelela kakhulu. Batshela ukuthi ubuhlungu buyenzeka ngemva kokuphathwa okuningana okunjalo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi lezi yiziphephelo kuphela zososayensi odumile, ezichazwe encwadini yakhe ethi "Hydrogen Peroxide: Izinganekwane Neqiniso." Kodwa ukulandela noma cha kuxhomeke kuwe. Kunoma yikuphi, khumbula ukuthi ngaphambi kokusebenzisa i-peroxide (ikakhulukazi ngokuphathelene nokujova), kufanele uxhumane nodokotela.